3 Zvakakosha Zvinodiwa kune chero Webhu Kunyorera | Martech Zone
Chipiri, July 1, 2008 Chipiri, Gunyana 4, 2011 Douglas Karr
Zvakawanda uye zvakanyanya, ndinozviwana ndobvunza vatengesi nemakambani mibvunzo yakafanana kakawanda. Kana iwe uri kufunga nezvekuvandudza yako pachako kunyorera, izvi zvinhu zvitatu zvinofanirwa kuve zvakabatanidzwa kubva pazuva rekutanga mune yako application kana iwe uchida kuchengetedza zviwanikwa gare gare.
Iva API? Izvo hazvidi kuve yakakosha kana sevhisi sevhisi… chero ol 'yakajeka XML ichaita. Tichazoda kuzvibatanidza mukushandisa kwedu rimwe zuva kuti zvifambe uye zviite kuti zvive nyore kune vatengi vedu kubata kuve neakawanda matekinoroji. Dai ndaizotanga kunyorera nhasi, ndaizoshanda kubva ku API kunze, uchinetseka nezve iyo Mushandisi Yemukati mushure… pamwe kunyangwe kuve neUI inosangana kuburikidza neiyo API kuve nechokwadi chekuti takaivaka zvakakwana.
Iva neArhente Feature? Tinoda kutengesa vatengi vedu muchikumbiro chako, asi tinoda kukwanisa kuzvitarisira. Heino muenzaniso: Sei Domain Registrars isina maAgent maAccounts apo mutengi anogona kuchengetedza muridzi wedomeini, asi iyo Sisitimu inogona kubata… uye kunyange kubhadhara… yekunyoresa? Ndanyora munyori wangu manheru ano uye ndakakurudzira izvi.
Iva neBusiness Feature? Makambani mazhinji uye akawanda angori maunganidzwa ezvidiki. Kumhan'ara kunofanirwa kuunganidzwa pamatanho mazhinji sesangano rine. Mutungamiri kuDivision VP kuna Regional Manager kuAccount… munhu wese anofanirwa kuve nemvumo yekuwaniswa pamwe nekupfupisa kushuma padanho chero ripi riri pakati.
Izvo zvakajairika zvinodiwa pakuita chaizvo zvauri iwe pamwe nezvinodiwa zvekuchengetedza zvinogara zvichishanda; zvisinei, izvo zvandinoda zvataurwa pamusoro zvinowanzo kufuratirwa kana kuiswa kumashure kuti zvigadziriswe gare gare. Ivo vanomuka kuunganidza guruva pane kumashure, sezvinoita software yekambani yako.
Dai ndaive Venture Capitalist mari yehunyanzvi hwebhizimusi muWebhu 2+ yepasirese, izvi ndizvo zvandaida. Kana usiri kana kuronga izvi zvinhu, ndinotenda ndinotora mari yangu kumwe kunhu. Kana ndiri tarisiro, ini ndinowanzoita.
Tags: kodhidhizaini infographicstsvaga vanokurudziramafontiGoogle +iframeiframe kutyorapurojekiti templateprwebwordpress login
Jul 2, 2008 pa 8: 46 AM
Pfungwa yako yesangano renzvimbo yekunyoresa domain inopenya. Izvi ndizvo chaizvo zvandinoda kune chimwe chirongwa changu.
Jul 2, 2008 pa 9: 48 AM
Ini ndaizonyatsoda iyo Agency Feature. Ini ndinochengetedza toni yemadomasi uye ndingade kuziva kuti iyo chaiyo dhatabhesi yakanyoreswa muzita remutengi wangu zvakadaro ini ndichiri kugona kuve ne100% kutonga kwehutungamiriri hwechidziro kwavari. Ini ndinofunga vatengi vanozoda izvi pamwe nekubvisa kutya kwekuti vanachipangamazano vanogona kuvaitira zvakaipa nezita ravo rezita kana hukama pakati pavo hukashata.
Jul 2, 2008 na9: 58 PM
100% vanobvumirana newe Doug, nezve API. uye Agency mamiriro… Excelent pfungwa!. Webhu Kunyorera = Ramangwana